Marko 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Marko Asɛmpa 4:1-41
AHENNI HO MFATOHO NO (1-34)
Ogufo no (1-9)
Nea enti a Yesu yɛɛ mfatoho (10-12)
Ogufo ho mfatoho no nkyerɛkyerɛmu (13-20)
Wɔnsɔ kanea mfa nsi kɛntɛn ase (21-23)
Nea wode besusuw ama nkurɔfo no (24, 25)
Ogufo a ɔdae no (26-29)
Sinapi aba (30-32)
Ɔde mfatoho yɛɛ adwuma (33, 34)
Yesu maa mframa yɛɛ dinn (35-41)
4 Na ɔsan fii ase kyerɛkyerɛe wɔ po no ano, na nnipadɔm kɛse bi betwaa ne ho hyiae. Enti ɔkɔforoo ɔkorow tenaa mu wɔ po no so, na na nnipadɔm no nyinaa wɔ po no ano.+ 2 Na ofii ase de mfatoho kyerɛkyerɛɛ wɔn+ nneɛma bebree. Bere a ɔrekyerɛkyerɛ wɔn no, ɔkae sɛ:+ 3 “Muntie. Hwɛ! Ogufo bi kɔe sɛ ɔrekogu aba.+ 4 Bere a ɔregu aba no, ebi koguu kwankyɛn, na nnomaa bedii. 5 Ebi nso koguu baabi a abotan wɔ a dɔte pii nni, na esiane sɛ dɔte pii nni hɔ nti,+ ntɛm ara na efifii. 6 Nanso bere a owia puei no, ɛhyee no,* na esiane sɛ enni ntini nti, ewui. 7 Na aba no bi nso koguu nsɔe mu, na nsɔe no nyinii, na emiaa no, na ansow aba.+ 8 Na ebi nso koguu asaase pa mu, na efifii na enyinii, na efii ase sow aba, ebi mmɔho 30, ebi mmɔho 60, na ebi nso mmɔho 100.”+ 9 Ɛnna ɔka kaa ho sɛ: “Ma nea ɔwɔ aso a ɔde betie no ntie.”+ 10 Na bere a ɛkaa ɔno nko ara no, wɔn a na wɔka ne ho no ne Dumien no fii ase bisabisaa no mfatoho no ho asɛm.+ 11 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo na wɔde ama mo sɛ monte Onyankopɔn Ahenni ho ahintasɛm kronkron+ no ase, na wɔn a aka no de, wɔde mfatoho na ɛka biribiara kyerɛ wɔn.+ 12 Enti wɔbɛhwɛ de, nanso wɔrenhu, wɔbɛte de, nanso wɔrente ase; na wɔrensakra da mma wɔmfa nkyɛ wɔn.”+ 13 Bio nso, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnim nea mfatoho yi kyerɛ, enti ɛbɛyɛ dɛn na moate mfatoho a aka no nyinaa ase? 14 “Ogufo no gu asɛm no.+ 15 Enti eyinom ne nea ekoguu kwankyɛn, baabi a woguu asɛm no; wɔn na wɔte asɛm no ara pɛ a, Satan ba+ beyi asɛm a wɔagu wɔ wɔn mu no.+ 16 Na eyinom nso ne nea ekoguu abotan so no; wɔn na wɔte asɛm no ara pɛ a, wɔde anigye gye tom.+ 17 Nanso wonni ntini biara, na wɔtena hɔ kakra; afei asɛm no nti, sɛ amanehunu ba anaa wɔtan wɔn ani ara pɛ, na ato wɔn hintidua. 18 Ebi nso wɔ hɔ a, ekoguu nsɔe mu. Eyinom ne wɔn a wɔte asɛm no,+ 19 nanso wiase yi* mu dadwen+ ne ahonyade nnaadaa+ ne nneɛma foforo ho akɔnnɔ+ wura wɔn koma mu, na emia asɛm no, na ɛnsow aba. 20 Afei nea woguu no asaase pa mu no ne wɔn a wotie asɛm no a wogye no fɛw so na wɔsow aba. Ebi sow 30, ebi 60, na ebi nso sow 100.”+ 21 Na ɔsan ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Kɛntɛn* anaa mpa ase na wɔde kanea si anaa? Ɛnyɛ kaneadua so na wɔde si?+ 22 Na biribiara nni hɔ a ahintaw a wɔremmue so; na biribiara nni hɔ a wɔde asie fee a ɛremma petee mu.+ 23 Obiara a ɔwɔ aso a ɔde betie no, ma ontie.”+ 24 Ɔka kyerɛɛ wɔn bio sɛ: “Monyɛ aso ntie asɛm yi yiye.+ Ade a mode susuw ma nkurɔfo no, ɛno ara na wɔde besusuw ama mo, yiw, wɔde bi bɛka ho ama mo. 25 Na obiara a ɔwɔ ntease no, Onyankopɔn bɛma no bi aka ho,+ na nea onni ntease no de, ntease kakra a ɔwɔ no mpo, Onyankopɔn begye afi ne nsam.”+ 26 Ɛnna ɔtoaa so kae sɛ: “Enti Onyankopɔn Ahenni te sɛ bere a obi gu aba wɔ asaase so. 27 Ɔda anadwo, na ɔsɔre anɔpa, na aba no fifi na ɛyɛ tenten; ɔkwan a ɛfaa so yɛɛ saa de, onnim. 28 Asaase no ara de nkakrankakra sow aba; edi kan yi ahaban, afei ɛbɔ bɛtem, na aba ba bɛtem no ho. 29 Na sɛ aba no nyin ara pɛ a, ɔtwe so kantankrankyi,* efisɛ na twabere adu.” 30 Na ɔtoaa so bisae sɛ: “Ɛdɛn ho na yɛde Onyankopɔn Ahenni bɛtoto, anaa mfatoho bɛn na yɛde bɛkyerɛkyerɛ mu? 31 Ɛte sɛ sinapi aba. Sɛ woredua wɔ fam a, ɛyɛ asaase so aba nyinaa mu nea esua koraa.+ 32 Nanso wudua wie a, enyin bɛyɛ kɛse sen afifide* foforo biara, na eyiyi nkorabata akɛse ma ewim nnomaa nya ne nwini ase tena.” 33 Enti ɔde mfatoho+ a ɛtete saa pii kaa asɛm no kyerɛɛ wɔn, sɛnea wobetumi ate ase. 34 Nokwasɛm ne sɛ, wankasa ankyerɛ wɔn a wanyɛ mfatoho. Nanso sɛ ɛka ɔne n’asuafo no nko ara a, na wakyerɛkyerɛ biribiara mu.+ 35 Na saa da no anwummere no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma yentwa nkɔ asuogya.”+ 36 Enti bere a wogyaa nnipadɔm no kwan wiei no, wɔde no tenaa ɔkorow no mu kɔe a na ɔnyɛɛ ahoboa biara, na na akorow foforo nso ka ne ho.+ 37 Afei mframa denneennen bi bɔe, na asorɔkye no bɔ baa ɔkorow no mu; ɛkaa dɛ, anka nsu rebu afa ɔkorow no so.+ 38 Nanso na ɔwɔ ɔkorow no akyi ada sumii no so. Enti wonyan no bisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, enti yɛrebewuwu yi, ɛmfa wo ho?” 39 Ɛnna ɔsɔree, na ɔteɛteɛɛ mframa no ka kyerɛɛ po no sɛ: “Mua w’ano! Yɛ dinn!”+ Na mframa no ano brɛɛ ase, na ɛyɛɛ dinn. 40 Enti obisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na ehu aka mo* saa? Adɛn, munni gyidi?” 41 Na ehu kɛse kaa wɔn, na wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Hena koraa ni? Mframa ne ɛpo mpo tie no.”+
^ Anaa “ekisae.”
^ Anaa “Kɛntɛn a wɔde susuw ade.”
^ Kyerɛ sɛ, afifide a wodi.
^ Anaa “Adɛn nti na mo koma atu.”